Zivisai Nomutsa: Usatambise yenyu Small Concrete Pump Truck! - China Qingdao CO-NELE Group
Zivisai Nomutsa: Usatambise yenyu Small Concrete Pump Truck!
Small kongiri pombi Rori imwe rinonyanya kushandiswa kuvaka zvokushandisa pakuvaka ouinjiniya indasitiri. Zvinonzi zvinowanzoshandiswa siyana youinjiniya construction.However, pachava nevamwe zvikanganiso mukushanda iri nedanho kushandiswa yedu zuva nezuva, izvo zvingaita kuti kunonoka kuvakwa nguva uye kuwedzera Kuparara machine.So iri kweizvi dambudziko, ngationei kunzwisisa zvakarurama kushandiswa nzira duku kongiri pombi rori pamwe chikamu chiduku chete.
Small pombi marori vanofanira kupomba zvakarurama uwandu mvura kumeso Mapaipi vasati kupomba .Some dzaishandisa vangasanzwisisa kuti pombi refu inofanira kuzadzwa nemvura yakakwana kuichengeta smooth.In chokwadi, kana mvura yakawandisa iri pumped panguva kuvakwa, pachava nevamwe dzaparadzwa uye usabuda zvindori pipes.Investigate chikonzero chacho, kana kurova nedhaka, inowanikwa kuti dhaka uye mvura kubatwa iri pasi mumvura kwenguva refu, mvura rinobvisa simende slurry, chimiro dhaka panguva iyoyo, pombi kuramba kunowandawo, chikonzero simende slurry kubva panzvimbo hunenge nedehwe mhete kuti extrude, ipapo kuumba kuvharidzirwa chubhu.
Check pfungwa idzi vasati kupomba:
A. The midziyo anofanira kuiswa zvakanaka uye zvakasimba sezvo zvaida;
B. Do vazadze mvura tangi nemvura yakachena; zadzai tangi ari kumeso girisi pombi pamwe lithium chawo girisi kumeso mafuta
C. The pakaputsika magirazi ndiro hakufaniri kunyanya guru, zvikasadaro zvichaita kuti mamiriro chete nokuda zvemukati leakage pamusoro pulp; Kufunga yakakwirira kupomba kufurirwa nokupararira huru kuchengeteka vharuvhu, chikuru hurongwa kufurirwa zvinogona kugadziridzwa kuti 28MPa.
Nokuti muridzo unoridzirwa chikumbiro, midziyo anofanira zvakazara iongororwe:
1, duku pombi rori refu daro kupomba nemishonga, edza kutema vanobwembura, uye tinofanira kusarudza kure sezvinobvira pane bend.Practice duku yakaratidza kuti ose okuwedzera vanobwembura ose 90o × R1000 kwakafanana nokuwedzera 5M chinjikira tube.Therefore, chete 4 12 90o × R1000 Bends zvaishandiswa mutopota marongerwo, uye vamwe vaiva 12 × 3m yakarurama nenyere 12 × 2m yakarurama pombi, ane zvachose kureba 310m.
2.Pay kuteerera chisimbiso pamusoro senyere uye fastening kuti pombi. Long-kure pombi anogona nokusangana chubhu kusvetukira kuwedzera muridze out.So yeuka kuti zvizere chisimbiso kuti muderedze zviri pakona uye vamwe ngaatarire.
3. Mushure kupomba, kuti Mapaipi inofanira kucheneswa yakakodzera uye Mapaipi anofanira kucheneswa kaviri kubva pakati kuitira kuchengeteka uye security.What vake zvikuru, ari chivhariso chipanje bhora, zvinofanira kuva pamberi samende mubhegi, mbiri chipanje balls, ndinoiitawo mumwe rokutsvaira pisitoni.
Tinotenda kuti uchiona ~
Post nguva: Dec-25-2019